ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို WhatsApp ကို ချစ်လာအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ စတိုင်လ်ကျသော အမျိုးသားများ
Alicia tomero | 14/11/2021 22:32 | စုံတွဲနှင့်လိင်, နည်းပညာ
WhatsApp ဖြစ်လာတယ် လူသုံးအများဆုံး လူမှုကွန်ရက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ အခုတွေ့ဖူးတဲ့လူတွေကို ဆက်သွယ်နိုင်ခွင့်ကို သင်ပေးနေပါတယ်။ သင်လည်းအများကြီးပိုသွားချင်တယ်ဆိုရင်, ဒီလျှောက်လွှာ အဲဒီလူကို အောင်နိုင်ရမယ်။ သင်နှစ်သက်သလို သင်လိုချင်တဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပါ။
သင့်တွင် မက်ဆေ့ချ်ပို့ရာတွင် အတွေ့အကြုံများစွာမရှိပါက သို့မဟုတ် မည်သို့တုံ့ပြန်ရမည်ကို မသိပါက၊ သင့်အား အကြံဥာဏ်များ သို့မဟုတ် သော့အချို့ကို ပေးစွမ်းနိုင်စေရန်၊ မင်းကြိုက်တဲ့လူကို အနိုင်ယူလိုက်ပါ။. သင်သည် မတူညီသောလူတစ်ဦးဖြစ်ရန် မလိုအပ်သော်လည်း ဆွဲဆောင်မှုရှိသော၊ ခွင့်မပြုသော သို့မဟုတ် ပေါ့လျော့မှုမဖြစ်ရန် သင်ကြိုးစားရမည်ဖြစ်သည်။ ထိရောက်မှုရှိမှဖြစ်မည်။ သင်နှစ်သက်သော ချိန်ခွင်လျှာကို ထားပါ။
1 ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို WhatsApp ကိုချစ်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
1.1 အဖြေတစ်ခုပေးပို့ရန် အချိန်ယူရသည်။
1.2 မက်ဆေ့ချ်တွေက ဘယ်လိုဖြစ်ရမှာလဲ။
1.3 လူချင်းမဆုံမချင်း လျှို့ဝှက်ချက်ကို သိမ်းဆည်းထားပါ။
1.5 ရှင်းပြချက်တွေကို ဘယ်တော့မှ မတောင်းဆိုပါနဲ့။
1.6 သူ့ကို စိတ်ဝင်စားသော်လည်း ပြစ်တင်ဝေဖန်ခြင်းမပြုဘဲနေပါ။
1.7 သင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကို သင်ကိုယ်တိုင်ပြသပါ။
ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို WhatsApp ကိုချစ်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
ဤအပလီကေးရှင်းမှတစ်ဆင့် စကားပြောဆိုနိုင်စေရန်မှာ အရေးကြီးပါသည်။ တစ်ဖက်လူရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ရှိပါစေ။. လက်တွေ့အားဖြင့် နံပါတ်တစ်ခုကမ်းလှမ်းခြင်းသည် ရေရှည်တွင် အဆက်အသွယ်အမျိုးအစားအချို့ကို ထူထောင်မည်ဖြစ်ပြီး အဓိကအားဖြင့် WhatsApp မှဖြစ်သည်။ အဲဒီလိုဖြစ်ရင် ဘာဖြစ်လဲ။ တစ်ဖက်လူက မင်းကို စိတ်ဝင်စားတယ်။ ပြီးတော့ ဒီလိုမျိုး အဆက်အသွယ်ကို စောင့်နေမှာ သေချာပါတယ်။
အကယ်၍ သူသည် သင့်ထံ စာရေးရန် ပထမခြေလှမ်းကို လှမ်းခဲ့သူဖြစ်ပါက၊ သိမ်မွေ့သောကိရိယာကို အသုံးပြုပါ။ ဖြေဆိုရန် အချိန်ယူပါ။ မင်း တစ်ခုခုပြောဖို့ ဆန္ဒရှိမယ်ဆိုတာ ငါတို့သိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် မင်း စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်အနေနဲ့ မင်းပုံမပေါ်နိုင်ဘူး။ သူ့ကို ခွင့်လွတ်ရင် အချိန်အတော်ကြာ ဆိုင်းငံ့ထားသည်။သေချာပေါက် သင့်အာရုံစိုက်မှုကို ရယူလိုပြီး သင့်အား အခြားမက်ဆေ့ချ်တစ်ခုဖြင့် ရှာဖွေပါ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ သင်သည် ပထမဆုံး မက်ဆေ့ချ်ကို ပေးပို့သူဖြစ်ပါက၊ သင်ကိုယ်တိုင် ပြသရပါမည်။ ကြင်နာပေမယ့် စိတ်မဝင်စားဘူး။ သင်သည် ပထမဆုံး အကြိမ် အလွန် ကြည်ညိုသော မိန်းမ မဟုတ်ကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ မက်ဆေ့ချ်များကို ကြည့်ရှုရန် တနေကုန် စောင့်မနေကြောင်း သတိပြုသင့်သည်။
မက်ဆေ့ချ်များ ဖြစ်ရမည်။ ရှင်းလင်းပြတ်သားပြီး ပျော်ရွှင်စရာ. ရှည်လျားလွန်းတဲ့ ရှင်းပြချက်တွေနဲ့ သင်္ဘောပေါ်ကို မသွားပါနဲ့၊ အမျိုးသားတွေက စာရှည်လွန်းတာကို မကြိုက်ကြပါဘူး။ စာကြောင်းတိုများရေးခြင်းဖြင့် သူတို့၏အာရုံကို သင်ရနိုင်သည်၊ သူတို့မှာ နောက်ခံရှိတယ်၊ အဲဒါတွေကို ဖတ်တဲ့အခါ သဘောကျတယ်။ ရယ်စရာလေးတွေနဲ့ ရယ်စရာကောင်းတဲ့ အထိအတွေ့က သူ့ကို အများကြီး ကျေနပ်စေမှာပါ။
ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် စကားပြောရတာကို နှစ်သက်ကြတယ်။မင်းရဲ့တစ်နေ့တာ ဘယ်လောက်ဆိုးသွားပြီလဲဆိုတာ မင်းသူတို့ကိုပြောပြဖို့နဲ့ သိပ်စိတ်မညစ်ပါနဲ့။ အကောင်းဆုံးတွေကတော့ အလိုအလျောက် ပေါ့ပေါ့ပါးပါး မက်ဆေ့ချ်များ မီမီမ် သို့မဟုတ် ရယ်စရာ ဗီဒီယိုများ ပေးပို့ခြင်းကိုလည်း သတိထားပါ၊ သင်၏ဟာသကို သူ နားမလည်သေးပါ။
လူချင်းမဆုံမချင်း လျှို့ဝှက်ချက်ကို သိမ်းဆည်းထားပါ။
မင်းဘယ်လိုနေလဲ သော့တွေအများကြီးမပေးပါနဲ့။သို့မဟုတ် သူတောင်းလျှင် ဓာတ်ပုံများ ပေးပို့ပါ။ လေ့ကျင့်ခိုင်းရင် ပိုတောင်ကောင်းသေးတယ်။ sextingအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူလိုချင်သည်မှာ သင်၏ဗလာကိုယ်လုံးတီးဓာတ်ပုံဖြင့် သူ၏အတ္တကို မြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သည်။ ယုံကြည်မှု သိပ်မရှိဘူးဆိုရင် ဓာတ်ပုံပေးပို့ခြင်း အလေ့အထသို့ မကျရောက်ပါစေနှင့် သူ့ကိုတကယ်မသိရင် ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ မင်းရဲ့ပုံကို ဘယ်လိုသုံးရမှန်းမသိဘူး။
၎င်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်ခံစားမှုများနှင့် ကိုယ်စားပြုမှုများဖြစ်သည်။ သူတို့က ပျော်စရာကောင်းပြီး ထိရောက်တယ်။ ဒါပေမယ့် အလွန်အကျွံမသုံးပါနဲ့၊ အဲဒါက ကလေးဆန်တဲ့ခံစားချက်ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ သင်ရေးသောအခါတွင် စကားစုသည် တုံးတိမဖြစ်စေရန် အခါအားလျော်စွာ သိမ်းဆည်းပါ။ အီမိုဂျီများ စိတ်ခံစားမှုကိုဖော်ပြရန်ကူညီပါ။ သင်ပေးပို့သော ထိုစကားစု၏ တိကျသောနည်းလမ်းဖြင့်သာ။
ရှင်းပြချက်တွေကို ဘယ်တော့မှ မတောင်းဆိုပါနဲ့။
ဖြေဆိုရန် အချိန်ယူရခြင်း၊ သို့မဟုတ် မက်ဆေ့ချ်များနှင့် မပြီးပြတ်ခြင်းအတွက် နာကျင်ပါက စိတ်မပျက်ပါနှင့်။ မင်းရဲ့ အနေအထားကို စောင့်ပြီး သူ့ကို မထိပါနဲ့။ သင့်အား ရှင်းလင်းချက်ပေးရန် စာတိုများဖြင့်. အမျိုးသားတော်တော်များများက တုံ့ပြန်ဖို့ အချိန်ယူကြပြီး အလျင်လိုနေတဲ့ အမျိုးသမီးက သင့်ကို လွှမ်းမိုးနိုင်ပါတယ်။ သူ မင်းနဲ့ တွဲနေတာလား ဒါမှမဟုတ် မင်းခံစားချက်တွေနဲ့ ကစားနေတာလား ? သံသယရှိသောအခါ obsessive မနေပါနဲ့ငြိမ်ငြိမ်လေးနေပါ။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကသာ သူသည် လူအမျိုးအစားနှင့် သူ၏ချစ်ခင်မှုကို ပြသသည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် သင့်အား ပေးပါလိမ့်မည်။
သူ့ကို စိတ်ဝင်စားသော်လည်း ပြစ်တင်ဝေဖန်ခြင်းမပြုဘဲနေပါ။
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ခံစားချက်များနှင့် သက်ဆိုင်သည်ကို နားထောင်လိုကြသည်။ အထူးသဖြင့် ယုံကြည်မှုသိပ်မရှိတဲ့အခါ အမျိုးသားတွေဟာ သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်နဲ့အမျှ သူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကို ပြောပြတဲ့အခါ၊ တစ်ခုခုပြောဖို့ အဆိုပြုရင် သူ့စကားကို နားထောင်ပါ။အကြံဉာဏ်ပေးသော အမျိုးသမီးတစ်ဦးရှိလျှင် အလွန်ကျေးဇူးတင်မိပါသည်။
ဤသည်မှာ သေးငယ်သော ဆွဲဆောင်မှု သို့မဟုတ် စိတ်အားထက်သန်မှု၏ အစတိုင်းတွင် သတ်မှတ်ထားသော အကြံဉာဏ်ဖြစ်သည်။ တခြားလူတစ်ယောက်လို ဟန်ဆောင်မနေပါနဲ့။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ နောက်ဆုံးမှာ ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်လို့ပါ။ မင်းရဲ့ အကောင်းဆုံးဗားရှင်းကို ရှာပြီး သူ့ကို ဖြည်းဖြည်းချင်း အထင်ကြီးသွားလိုက်ပါ။အနည်းဆုံး မင်းရဲ့ ပထမဆုံးရက်စွဲအထိ။ ဓာတ်ပုံများတွင်လည်း အလားတူပါပဲ၊ အလွန်အကျွံ ပြုပြင်ထားသော ဓာတ်ပုံဖြင့် အောင်နိုင်စေရန် မကြိုးစားပါနှင့်၊ သင် တတ်နိုင်သမျှ သဘာဝအတိုင်း သင့်ကိုယ်သင် ပြသပါ။
ပြီးတော့အားလုံးအထက် နှုတ်ဆက်ဖို့ သင်ယူပါ။ စိတ်ဝင်စားမှု သိပ်မပြရင် နှုတ်ဆက်လိုက်ပါ။ သင့်ဦးတည်ချက်အတိုင်း မတုန်မလှုပ်မလှုပ်နိုင်သော အရာတစ်ခုကို ဆက်လက်ရှာဖွေရန် မကြိုးစားပါနှင့်၊ ဖုံးကွယ်ရန် တစ်စုံတစ်ယောက် လိုအပ်နေသူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းချက်များနှင့် သင့်အတ္တကို တိုးပွားစေသည်။. ထို့ကြောင့် အရာရာတိုင်းကို မပေးမိစေရန် ဤသဘောတရားများကို ပိုင်းခြားရပါမည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » fit » စုံတွဲနှင့်လိင် » ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို WhatsApp ကိုချစ်လာအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
ယောက်ျားတစ်ယောက်က မင်းကို ငြီးငွေ့နေလားဆိုတာ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။